GEFKII HORE HA GELIN, ISKA JIR GOLUHU WAA DIYAAR
W/Q:Mursal Max'ed Max'uud(Garaad)
Barlamaanka Soomaaliya waxay qaateen talaabo geesinimo, oo aad loogu riyaaqay. Lama filayn in Barlamaanku uu qaadan karo talaabadaan, iyadoo dad badani ay tuhun sanaayeen in la wiiqay awoodii Barlamaanka, kadib markii la go'aamiyey in dhexdooda uun laga soo xusho Golaha Xukuumadda. Mar haddii ku dhowaad 80 xubnood ay noqdeen Wasiiro waxaa la sii saadaalinayey in Wasiir walba uu ku guulaysan karo inuu ugu yaraan hal Xubin oo Barlamaanka ka tirsan ka dhaadhacsho in uu Codkiisa Kalsoonidda siiyo Xukuumadda, taas oo aan la arki lahayn cid is hortaagi karta Dowladda ha khaldanaato ama ha sax sanaatee. Niyad-jab ayeey ku abuurtay arintaasi shacabka Soomaaliyeed oo aaminay in ay gacanta u galeen hal koox oo Ethopia hoos tagta.
Talaabadda uu Barlamaanku qaatay waxay fariin cad u tahay cid kasta oo isku dayeeysa in ay wax maroorsato in aan laga ogolaan doonin oo sharciguna Qof walba ka waynyahay. Golaha Shacabku waxay iska mayreen xantii hoosta laga waday ee ahayd in ay noqon doonaan Gole sacbis, maadaama markoodii hore ay ku soo galeen Barlamaanka Feermadda Hogaamiyayaasha Dagaalka.
Xukuumaddii Kalsoonidda waysay ee uu soo dhisay Prof. Gedi, waxay ahayd mid aan u cuntami karin Umadda Soomaaliyeed, Xukuumad ay isku bahaysteen taageerayaasha Xabashidu, Xukuumad hal dhinac u raran oo inta badan Beelaha Soomaaliyeed lagu dulmay iyo Xukuumad aan marnaba lajaan qaadi karin wacyiga jira iyo xaaladda haatan uu Dalku ku suganyahay. Sidaas darteed ayeeyna runtii candhuuftoodii dib ugu liqeen dad bdan oo ka dhursugayey Dowladda mudo dheer.
Waxaa xusid mudan in meelo badan oo Dlka ah ay ka jireen shirar fara badan oo looga arinsanayey qaabka ugu wanaagsan ee Xukuumadda loogu soo dhawayn karo Dalka, iyo howlo iskaa wax u qabso ah oo lagu nadiifinayey Ilihii dhaqaalaha sdia Dekedda Xamar iyo Garoonka Diyaaradaha, Waxayse howla haasi mar qura istaagayn kolkii ay soo baxday Shaxdii qaribnayd ee lagu magacabay Golaha Xukuumadda. Afkaar laga uruuriyey Dadka ayaa 75% shaki geliyeen suurta-galnimadda in Dowladdu si fudud uga howl geli karto gudaha Dalka.
Sikastaba ha ahaatee Barlamaanku wuxuu ka hortegay in la marsiiyo dhibaato wayn oo ku soo fool lahayd Dalka&Dadka, taas oo ay aad u bogaadiyeen una soo dhoweeyeen Dadka ay metelaan, waxayna muujiyeen sababta loo sheego in Barlamaanku wakiil kayahay Shacabka.
Dhanka kale Markii Codka lagu riday Xukuumadda. Prof.Ged, waxaa ka soo fakaday hadal aan laga malaysanaynin, taas oo uu ku sheegay in uusan aqoonsanayn go'aankii Barlamaanku gaaray, isagoo laba codlaynaya oo mar leh weli maba aanan gayn Barnaamijkii Xukuumadaydee maxaa Kalsooni laygala laabtaa, markalena leh "tiro iga qaadi karta maba joogin ee 153 shaqsi ee gacmaha kor u taagay waxay ahaayeen Suxufiyiin iyo Dad caadi ah oo ka yimid Xaafadda Islii". Codkani ma'ahan mid laga sugayey Geedi oo kale waayo ma'ahan kii aqoonyahanka ee waa kii hogaamiye Kooxeedka,oo 14kii sanno aan maqli jirnay hebel xilkiibaa laga qaaday, isna kuma uu qancine seeftiisa ayuu gasha kala baxay I.W.M. Arintani Ra'isul wasaaraha weji gabax ayeey ku noqtay, taas oo wax u dhibtay sumcadiisii aqoonayd. Waxayna dadku ka qabaan labo doodood oo mid oronayso"Hogaamiye kooxeed muxuu uga bedelan yahay, sow kuma imaanin Rabitaankiisa" halka dad kalena ay qabaan in aan loo qaban Profisarka hadalkaas, waayo bay leeyihiin Nasiibkiisii badnaa ee uu ku noqday Ra'sulwasaaraha Somaaliya isagoon ku jirin dhinacyadii ku hardamayey Siyaasadda Dalka, ayuu rumaysan waayey in nasiibkaasi uu isku soo koobay Bil iyo maalmo qura ileen Soomaalidu Xukunka waara ayeey jeceshahaye.
Mida ugu darayd ee laga cabsi qabay waxay ahayd suurta-galnimadda in Mdaxweyne C/laahi Yuusuf ku raaco aragtidda Wasiirkiisa 1aad, waayo C/laahi isagu horay ayuu ugu caanbaxay taladda oo uu isku koobo, waxaana lagu bartay hab-dhaqankiisii Maamulkii Puntland ee uu Madaxdda ka ahaa, haseyeeshee markaan wuxuu qaatay Dowr muhim ah oo uu ku aqbalayo go'aankii Barlamaanka. Malaha Odayga waxaa dhegta loogu sheegay in meeshu aanay ahayn Puntland ee markaan uu horkacayo Qarankii Soomaaliyeed, sidaas ayeeyna u bdan tahay in lagula taliyey, dabcan haddii C/laahi ku raaci lahaa Prof. Gedi, in aan dheg jalaq loo siinin qaraarkii Barlamanka, markaas waxaa dhici lahaa fashil balaaran, waa marka horee sharcinimadda C/laahi ayeey su'aali ka taagnayn lahayd, haddiiba aanay go'aan qadan karin Xubnihii isga soo doortay, marka xigtana waxay noqon lahayd nasiib darro Umadda ku habsata, oo Madashii Nabadda la,isaga dareero mudo dheer kadib.
Waxaa Muuqata in Madaxweyne C/laahi markaleba yeelkeede uu markaan ku amaanan yahay in aanu raacin taladda Qab-qablayaasha ee la soo indhacadaa, in kuwa go'aanka gaaray aan loobaahnayn iyaguna ay yihiin kuwii Hubka hayastay ee wax meel marin lahaa, sidaas darteed Dowladdu ay howsheeda guda gasho, iyagoo intaas kaliya maahane handadaad iyo xaqiraad iskugu darayey qaar ka mid ah Xubnaha Baarlamaanka, waxayna aflagaadooyinka ugu badani ku dhacayeen Gudoomiyah Barlamanka Mudane Sharif Xasan. C/laahi markaas wuxuu ka qaatay Dowr dhex dhexaad nimo Waloow aad mooday in uu si uga ganbanayey in uu yiraahdo Geedi waa sax sanyahay, haddana si buuxdda ayuu u aqoonsaday una qaatay go'aankii Barlamaanka, markalena wuxuu soo celshay Ra'isul wasaarihii kalsoonidda waayey taas oo sharcigu u oglaanayo.
Hadaba Maxaa lagudboon Ra'isul Wasaare Geedi
Waxaan filayaa in Prof, Geedi aanu qaadi doonin wadadii Qarda-jeexa ahayd ee qodxaha badani ka mudayn, isla markaana uu sahan san doono mid cusub,waayo Debkii lagu gubto ayaa Danbaskiisana laga Durkaa. Mudane Geedi, wuxuu sifiican maanta u ogyahay in waxa lagu haystaa aanay ahayn oo kaliya Barlamanka oo aan lagu hor dhaarin iyo Barnaamijkii Dowladdiisa oo uusan ku hor keenin Barlamaanka waqtigii xadidnaa ee 30ka maalmoo gudahood. Balse ay tahay waxa lagu haystaa Xubnaha uu soo magacaabay oo aan badankood taariikh fiican oo wax-gal ah wax-goyn mooyaane aan ku dhex lahayn Dadka iyo tan ugu daran oo ah hanaankii wax qaybsiga oo uu meesha ka saaray inta badan Beelaha Soomaaliyeedna la duudsiiyey Xaqoodii.Sidoo kale Wasaaraddo fara bdan oo hadana shaqadoodu iska wada hor-imaanayso aanay ahayn kuwii wax bad baadin lahaa.
Dowladdii uu hor kacayey Dr. Cali Khaliif Galayr, Wasaaradeheedu weey yaraayeen waxaana iska dhex arkayey dhamaan Qbaa'ilka Soomaaliyeed Qaylo badanina mataagnayn. Sidaas darteed Prof. Gedi, dhibatada ku haysataa waxa weeye in aad doonayso in aad wada qanciso dhamaan Hogamiyayaasha Dagaalka, adigoon u fiirinaynin aqoontooda iyo kartidooda, lagana yaabo in sedex iyo tiro kabdanba ay isku jufo yihiin. Hadaba waa Su'aal ku hortaalee, in aad qanciso Hogaamiyayaasha Hubaysan iyo in Shacabku raali ka noqdaan, Dowladdana gacmo furan iyo hagar la'aan kula shaqeeyaan middii aad dooran lahayd adaa iga og.
Waxaanse ugu danbayntii ku leeyahay Xubno Damiirkooda Somalinimo iyo Wadninimo uu shaqaynayo ayaa ku jira Golaha shacabkee, markaan ha ku waayin Jagadaada in aad ka weecato wada Guusha, isku day in aad ilaa xad u madax banaanaato dhismaha Xukuumaddaada, isla markaasna aad kaligaa ula timaado Madaxweynaha Shaxdii aad wax ku magacawday, haba kugu diidee, ogowna haddii aad soo celiso tii shalay, ama wax u dhigma fashilbay u danbayne. Ugu danbayn Geediyoow Gefkii hore ha gelin, ogoow Goluhu waa Diyaar.
W/Q:Mursal Max'ed Max'uud(Garaad)Email: stethy1@yahoo.com